H.265 ama Karti Sare Video sireed (HEVC) waa technology a video codec cusub. Waa heer video riixo in uu yahay bedelka ay u H.264 ama MPEG-4 AVC (Advanced Video sireed), mid ka mid ah dhismeyaasha riixo isticmaalaan Blu-ray. HEVC laban ratio riixo xogta marka la barbar dhigo H.264 ama MPEG-4 AVC heer la mid ah oo tayo video. Taasi waa file video Tifaftirayaasha noqon doonaa baaxadda file video Tifaftirayaasha la H.264 badhkiis. Waxa kale oo ay hagaajin kartaa nooca video heerka xoogaa isku mid. H.265 taageeri kartaa ilaa 8K UHD iyo xallinta ilaa 8192x4320.
Qeybta 1: Maxaad u baahan tahay H.265?
Qeybta 2: History of H.265
Qeybta 3: H.265 Container
Qeybta 4: Waa maxay content isticmaali doonaa HEVC?
Qeybta 5: Sida loo Play file H.265
Qeybta 6: Sida loo Beddelaan H.265 Files in qaab kale
Qaybta 7: H.265 VS H.264
Qaybta 8: H.265 VS VP9
Waxaa jira dhowr ah camera HD xirfadeed waxaa suuqa iyo xogta ka soo baxay waa kuwa aad u weyn. Cabbirka file video abuuray kamaradaha kuwa ugu waa weyn yahay. Waa in ay jiraan qaar ku haboon si ay u qaado videos kuwa aad guriga la bandwidth la mid ah in aad u isticmaalaan internet-aad. Tani waxaa lagu gaari karaa siyaabo badan. Mid ka mid ah habka, waxaana suurto gal ah habka ugu fudud, waa in ay ku cadaadisaa xogta si xoogan taas oo ugu danbeyn hoos u dhigi doontaa tayada sanamkii. Hab kale waa in la helo compressing technology wanaagsan oo hoos u dhigi doontaa tirada aan wax u dhimin tayada sanamkii. H.265 waa nooc ka mid ah technology riixo loo abuuray hayo ku hay jidka labaad. Waxaa qaniinaa video UHD haynay oo tayo la mid ah oo video ah.
Sannadkii 2004, ITU-T Video sireed Expert Group (VCEG) bilaabay horumarinta bedelka ay u H.264 ka codec iyo sanadkii 2007 ISO / IEC Guuritaanka Picture Expert Group (MPEG) bilaabay safarka ay isku jiho. Sanadkii 2010, kooxaha MPEG iyo VCEG iska kaashaday on Call si wadajir ah u jeedinta iyo aasaasay Joint Iskaashiga Kooxda on Video sireed (JCT-VC) si ay u horumariyaan heerka HEVC ah. On January 25, 2013 content farsamo ee HEVC waxaa lagu dhameystiri iyo April 13, 2013 si rasmi ah u la caddayn sida caadiga ah.
Ilaa hadda, weelasha in ay taageeraan H.265 ama HEVC waa sida soo socota:
MPEG gaadiidka il - isticmaalaan ATSC, DVB iyo cajalid Blu-ray. Magaca File kordhin weelka tani waa .ts, .tsv, .tsa.
Gaadiidka warbaahinta MPEG - heer weel digital horumarka ka yar.
ISO qaab file warbaahinta ku salaysan -used sida aasaas u ah qaab kale oo file warbaahinta. Kordhin File magacaaga .mp4, .3gp, .3g2, .mj2, .dvb, .dcf, .m21
Matroska - furan qaab caadiga ah weel oo lacag la'aan ah. Kordhin File magaca sida .mkv, .mk3d, .mka, .mks
Qeybta 4: H.265 Container
In ku dhow mustaqbalka, HEVC waxaa loo isticmaali doonaa kasta content. Waa arrin go'aan u adeega in ay u diraan macluumaadka la adeegsanayo HEVC / H.265 halkii MPEG-4 / H.264. Shirkado badan ayaa hore u bilaabeen in ay isticmaalaan HEVC u hoorto content 4K. Netflix, Amazon, M-taga waa wax yar oo ka mid ah. Netflix ayaa bilaabay in ay isticmaalaan si ay u sii qulquli HEVC 4K content in yar 4K TV'yada qalabaysan in uu kelmadaha HEVC. Horseedka saaraha television sida LG, Samsung, Sony, Vizio, Panasonic iyo Toshiba samayn doontaa telefishin oo taageero HEVC iyo telefishinada kuwa awood u yeelan doonaan inay sii qulquli 4K content.
Amazon ayaa soo fujiyo la istuudiyaha kale oo dhowr ah sida Warner Bros, Lionsgate, 20 Century Fox oo Discovery u hoorto content 4K isticmaalaya HEVC. Adeeg Streaming M-go ayaa sidoo kale ku dhawaaqay isku via app ah u Samsung telefishin.
In kastoo shirkadaha cable aan baahinta 4K weli, iyagu waa inay go'aan ka gaari doona in sannadaha soo socda. DirectTV iyo Comcast ee Xfinity isticmaali doonaa app ay ku qulquli 4K content Internetka in Samsung TV.
Smartphone Qaar ka mid cusub sida Sony Xperia Z2 ayaa waxaa ka mid ahaa taageerada HEVC in ay toogtaan 4K video.
Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 3 ciyaartoy ka ciyaari kara faylasha HEVC:
Wondershare Player Waa ciyaaryahan warbaahinta awood badan oo xal cajiib ah u ciyaaro files HEVC. Waxay bixisaa taageero aan xuduud lahayn in tiro balaadhan oo ah qaab maqal iyo muuqaalka leh.
Bal aynu eegno sifooyinka socodyada muhiimka ah Wondershare Player:
Waxaa ka ciyaari kara MPEG, MKV, wmv, AVI iyo qaabab kale oo badan oo tayo sare leh.
Waxaa ku shuban karto iyo ciyaaro files Cinwaan in dameer, SSA iyo srt.
Waxa kale oo ay astaysto size Cinwaan, midabka iyo kuwa kale.
Waxay qaadataa xasuus yar inuu u ciyaaro video tayo sare leh.
GPU ayna hardware si weyn kor u-fiican-fasalka video waxqabadka.
Playlists waxaa si toos ah u abaabulan.
Bookmark karaa jecel online video clips.
Kuu ogolaanayaa xiritaanka si toos ah ka dib markii loo maqli karo.
Ciyaaryahanka DivX waa ciyaaryahan kale oo xooggan HEVC file video. Waa software abaalmarinta ku guuleystay in loo maqli karo bixiyaa HEVC. Waxay bixisaa loo maqli karo oo tayo sare leh ee filimada, TV muujinaysaa. Waxa ay taageertaa dhammaan qaabab loo jecel yahay sida AVI, DIVX, MKV, MP4 iyo in ka badan. By isticmaalaya ay ka mid DivX Media Server qulquli karaan music, video iyo sawiro qalab DLNA-socon kasta oo guriga sida line PS3, Madaxweyne Siilaanyo, ama Samsung Galaxy ee wax soo saarka. Iyadoo Stream ah inuu ciyaaro ciyaaryahanka user sidoo kale xakamayn karo oo qalab ay sii qulquli karaan videos si ay u.
Muuqaaladan socodyada muhiimka ah DivX Player waa:
Waxa ay taageertaa video ilaa 4K.
Taageerada Cinwaan kala duwan af-iyo xidhiidh u dhexeeya fudud subtitles ah.
Taageerada kuwan raadkaygay badan audio.
FF siman / RW kuu ogolaanaya navigation deg deg ah goobta la doonayo.
Heli karaa goobaha kala duwan leh oo keliya riix badhanka ee.
Qulquli karaa videos, muusig iyo sawiro qalab DLNA-socon wax.
Kala socon kartaa oo ka mid ah content DivX iibsaday.
Ciyaaryahan kale oo in ka ciyaari kara file HEVC waa Media VLC ka Player, kaas oo ah ciyaaryahan asal xor ah oo furan iyo qaabka. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan files multimedia. Waxaa sidoo kale ka ciyaari kara DVD-yada iyo hab-geeyo kala duwan.
Muuqaaladan socodyada muhiimka ah ee media player VLC waa sida Bufinkii:
Waa sahlan, si degdeg ah oo awood leh media player.
Ciyaaraa codecs ugu MPEG, DivX, MKV, WebM, wmv, MP3 iyo qaar badan oo
Waxaa waddaa on dhan dhufto ee ay ka mid yihiin Windows, Mac OS X, Linux, Unix.
Waxaa qaban karto diinta warbaahinta iyo kuwo liita
No spyware, ma xayeysiis iyo ma user raadraaca.
Si loogu badalo files H.265 in qaab kale oo aad u baahan doontaa Converter awood leh oo la isku hallayn karo. Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid ah. Wondershare Video Converter Ultimate Waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac OS X. Sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Converter ah. Muuqaaladan socodyada Wondershare Video Converter Ultimate ka mid ah waa:
Waxay bixisaa 30x diinta ka dhaqso badan wax qalab diinta kale laga heli karo suuqa.
Waa in gebi ahaanba qaab kasta oo loogu badalo kartaa file video ah.
Wareejin karaa gediyay video files in qalabka kale ee isticmaalaya network Wi-Fi.
Gubi karaa video files si DVD.
Sidoo kale xaalkaa kartaa file video hor diinta.
Waxa kale oo kala soo bixi kartaa YouTube video iyadoo hal click.
Aan aragno talaabo nidaamka talaabo si loogu badalo files H.265 in qaab kale.
Waxaa Download ka hoos ku qoran oo ku rakibi Wondershare Video Converter Ultimate on your computer oo abuurtaan.
Tallaabada 2 Add / Import files si Converter ah
Dooro tab badalo haddii aan hore u soo xulay. Waxaad ku dari kartaa / files dejinta laba siyaabood oo kala duwan. Jidka First waa adigoo gujinaya badhanka files Add ee dhinaca sare bidix ama xarunta leeg- ah.
A new window Open muuqan doonaa. Laga soo bilaabo waxaa aad isticmaali kartaa oo dooro file video badbaadiyey on your computer ah. Habka labaad waa ka sii dhib yar. Just furo buugga ay ku jiraan video file ka dibna si fudud u jiidi ka tusaha iyo hoos on Murayaad software ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa files badan waqti.
Tallaabada 3 Dooro qaab wax soo saarka
Hadda waxaad u baahan doontaa inaad doorato qaabka wax soo saarka ah ee doorashada. Taas waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya liiska hoos-hoos Qaabka Output dhinaca midigta leeg- ah. Wondershare Video Converter Ultimate Taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabka ay u badalaan file H.265 aad. Waxa kale oo aad loogu badalo kartaa video files u qalab aad doorato.
Tallaabada 4 Buuxi raanta
Hadda uun u baahnaan doontaa inaad guji badhanka badalo ee geeska midig hoose ee shaashadda ah. Sug ilaa diinta ka dhamaato. Time si ay u buuxiyaan qaab beddelidda mar walba ku xirnaan doontaa baaxada iyo tirada files in aad diinta.
Marka diinta waa dhameystiran waxaad ka heli kartaa meel ka mid ah files gediyay adigoo gujinaya batoonka Folder Open hoose ee shaashadda. Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa meesha uu halkaas ka hor inta qaab beddelidda.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad u bedeli karaan kale videos in files H.265 la Wondershare Video Converter Ultimate. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in la beddelo codec ee Dejinta si H.265 marka aad diinta video ah in MP4 ama qaab kale oo lagu taageerayo H.265.
Magaca MPEG- 4 AVC (Advanced Video sireed) HEVC (Karti Sare Video sireed)
Wareege Wareege in MPEG-2 Qaybta Wareege in MPEG-4 AVC / H.264
Horumarinta Hoos heerka Inyar marka la barbar dhigo MPEG-2 waa 40-50% Inyar hoos heerka heer la mid ah oo tayo leh muuqaal ah marka la barbar dhigo H.264 waa 40-50%
Resolution Taageerada ilaa 4K (4,096x2,304) Taageerada ilaa 8K (8,192x4,320)
Heerka jire Taageerada ilaa 59,94 fps Taageerada ilaa 300 fps
Taariikh 21 profiles ansixiyay 3 profiles ansixiyey, qabyo ah oo dheeraad ah 5
Entropy sireed Entropy sireed waa CABAC iyo CAVLC Entropy sireed waa kaliya CABAC
Model riixo Model saadaasha aan ollogga-temporal Hybrid Wanaajiyey Hybrid model saadaasha aan ollogga-temporal
Adoption Industry Adag oo aqbalay video codec u cable, tan kuwa dhulkuna, satellite iyo warbaahinta IPTV. Loo isticmaalo guud ahaan Blu-Ray, hannaankooda ammaan, shir video, video mobile, ciyaartoyda warbaahinta, video chat iwm Banaanbaxa Fulinta ee guud ahaan NAB, IBC, iyo dhacdooyinka kale ee laga bilaabo 2012 shirkado tusaale ATEME, Broadcom, Thomson, Harmonic, Ericsson, Qualcomm iwm kordhiyo RD guud ahaan iibiya encoder / decoder u software iyo hardware xal ku salaysan.
Sanadka ee Ansixinta La ansixiyey 2004 La ansixiyey ee 2013
Cillado Gudbinta ee content UHD waa aan macquul ahayn, sida looga baahan yahay heerka xoogaa waa mid aad u sarreeya. Qiyaastii. Xisaabeed 300% ka badan oo qaali ah ay sabab u tahay unugyada saadaasha waaweyn oo qaali ah Motion ku qiimaysay.
VP9 ama Video Processing 9, bedelka ay u VP8, waa heerka furan oo daacad free video riixo horumariyo by Google. Waa Google ee mashruuca il furan ugu dambeeyey, kuwaas oo bartilmaameed u yahay in la hagaajiyo gaarsiinta content Internetka. Waxaa la filayaa in la yareeyo tirada faylasha video nus, is barbar technology Deji hadda loo yaqaan H.264 ama MPEG-4. Waxaa loo isticmaali doonaa in cadaadin files video iyo il at 4K xal.
Google ayaa horey ugu dhawaaqay in VP9 loo isticmaali doonaa 4K content on YouTube. Google Play sidoo kale ay u badan tahay in ay isticmaalaan VP9 u hoorto adeega video. Marka adeeg kasta oo gaar ah ayaa go'aansan doonaan in ay content isticmaalaya VP9 diri, waa qasab inuu jiro qaar ka mid ah qalabka socon in uu ordo content in - kaas oo noqon doona caqabad weyn oo VP9. Google ayaa horey u-wadaag shirkadaha qaar ka mid ah sida Intel, ARM, Broadcom, Marvell, Nvidia, Qualcom, RealTek, MediaTek, iyo li'idiisa u soo saarta VP9 chips socon oo ka kooban.
Sidaas awgeed waxa macquul ah in aan waa is barbar H.265 iyo VP6. Isbarbar u dhexeeya labada heerarka video Deji hoos ku qoran
Magaca Video Processing 9 HEVC (Karti Sare Video sireed)
Wareege Wareege in VP8 Wareege in MPEG-4 AVC / H.264
Developer Soo diyaariyay Google sida riixo heerka furan iyo free video ah Ay u sameeyeen wadajir Video sireed Expert Group (VCEG) iyo Guuritaanka Picture Expert Group (MPEG).
Horumarinta Hoos heerka Inyar marka la barbar dhigo VP8 waa 40-50% Inyar hoos heerka heer la mid ah oo tayo leh muuqaal ah marka la barbar dhigo H.264 waa 40-50%
Resolution Taageerada ilaa 8K (8,192x4,320) Taageerada ilaa 8K (8,192x4,320)
Isbarbar Performance VP9 qaadataa waqti yar toddoba jeer in encode H.265 gaaray heerka yara 43.3% hoose ka dibna VP9
Taariikh laba profiles ansixiyay saddex profiles ansixiyey, qabyo ah shan dheeraad ah
Adoption Industry Google ayaa horey ugu dhawaaqay in VP9 loo isticmaali doonaa 4K content You Tube iyo Google Play Video adeega. Google ayaa horey u-wadaag shirkadaha qaar ka mid ah sida Intel, ARM, Broadcom, Marvell, Nvidia, Qualcom, RealTek, MediaTek, iyo li'idiisa u soo saarta VP9 chips socon oo ka kooban. Banaanbaxa Fulinta ee guud ahaan NAB, IBC, iyo dhacdooyinka kale ee laga bilaabo 2012 shirkado tusaale ATEME, Broadcom, Thomson, Harmonic, Ericsson, Qualcom iwm kordhiyo RD guud ahaan iibiya encoder / decoder u software iyo hardware xal ku salaysan.
Year of Origin Bilowga sii daayo December 13, 2012 La ansixiyey ee April, 2013
Cillado Gudbinta ee content UHD laga yaabaa in si weyn ugu tartami sida looga baahan yahay heerka waxoogaa la mid aad u sarreeya in ay is barbar H.265 Qiyaastii. Xisaabeed 300% ka badan oo qaali ah ay sabab u tahay unugyada saadaasha waaweyn oo qaali ah Motion ku qiimaysay.
Rayburn ka Frost & Sullivan dhergiyey in HEVC ma la gayn karo ilaa kaabayaasha encode buuxa, fasirid iyo gaadiidka waxaa loogu tala galay. Warka wanaagsan waa in shirkadaha waaweyn ee qaar ka mid ah ayaa horay u bilaabay in ay qaataan H.265. Waxaa jiray dad badan oo grumblings inta lagu jiro horumar ah ee H.264 oo la mid ah waa Xaq u H.265. H.265 sidoo kale yeelan doonaan in ay caqabado ka VP9 tartan ay. Iskusoo wada duuboo, heerka hoose ee xogta la tayo la mid ah ayuu u fiican yahay wax walba.
> Resource > Video > All aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan H.265